Ukhenketho kwiSibhengezo saseGlasgow ngoTshintsho lweMozulu Abadlali abatsha abanamandla bangaphezulu kwe-UNWTO okanye iWTTC
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » News Sustainability » Ukhenketho kwiSibhengezo saseGlasgow ngoTshintsho lweMozulu Abadlali abatsha abanamandla bangaphezulu kwe-UNWTO okanye iWTTC
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Utyalo mali • iintlanganiso • iindaba • abantu • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • ISpain Iindaba Eziphambili • News Sustainability • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK
Ngelixa i-Spain kunye ne-Saudi ekhokelwa yintlangano yohambo kunye nokhenketho ifuna isenzo kungekhona izibhengezo, iSibhengezo seGlasgow ngesenzo seMozulu sisayinwe kule veki.
Bangaphezu kwama-300 abathathi-nxaxheba kwezokhenketho babhalisele iSibhengezo seGlasgow malunga neNyathelo yeMozulu kule veki, eqaphela imfuneko engxamisekileyo yesicwangciso esingaguqukiyo sehlabathi malunga nentshukumo yemozulu kukhenketho.
Ngelixa umatshini we-propaganda we-UNWTO wawunethemba lokuguqula lo mcimbi wokutshintsha kwemozulu ukuba uphembelele i-WTTC ukuba ivume uNobhala-Jikelele wayo kwinkqubo yokuqinisekisa ulonyulo oluzayo kamva kule nyanga, i-WTTC yakwenza kwacaca ukuba ayivumeli nabani na.
Ilizwe lezokhenketho nangona kunjalo limanyene xa kuziwa kutshintsho lwemozulu. Abanye bazisa ukudodobala, abanye bagxile kwisenzo esinzulu ngakumbi, kodwa uTshintsho lweMozulu ngoku lugqaliselo kuvuselelo olutsha lweshishini lokuhamba kunye nokhenketho kunye nasemva kwe-COVID-19.
Ngokwengxelo efunyenwe ngu eTurboNews ukusuka the IBhunga leHlabathi lokuHamba noKhenketho, iWTTC, i-Declaration ye-Glasgow linyathelo elikhokelwa yimbumbano equka i-UNEP, i-Tourism Declares, i-Travel Foundation kunye nenkxaso ye-UNFCCC.
Ayisiyiyo nje i-UNWTO ekhokelwayo, ngokwale ngxelo ye-WTTC.
I-WTTC inobudlelwane obuluqilima kunye nemibutho emininzi ye-UN kuquka oku ngasentla, ngaphezu koko, sinokuzinikela okuqinileyo kuTshintsho lweMozulu kwaye amaLungu ethu afuna ukubonisa ubunkokeli ngokuvuma umnqweno wesibhengezo ngexesha elibalulekileyo.
Amalungu amaninzi e-WTTC afana ne-Accor, i-Iberostar, kunye nabanye basayine isibhengezo, kwaye ngoko ke kwakubalulekile ukuba i-WTTC yongeze ilizwi layo ukuxhasa umnqweno we-net zero kunye nokuzinikela ekuxhaseni amaLungu ayo ekuphuhliseni iziCwangciso zokuSebenza kweMozulu.
Nangona kunjalo, inkxaso ye-WTTC evezwe kwiNgqungquthela yaseGlasgow yayingekho ngendlela ehambelanayo ne-UNWTO Secretart-General yonyulo okanye nayiphi na inkqubo yezopolitiko, njengoko yaguqulelwa kwamanye amagqabaza abonwa kwi-media media postings kufuphi ne-UNWTO.
Ngokutsho kwemithombo yeendaba ezentlalo ezibonwayo kwiindawo ezixhasayo ze-UNWTO, iSibhengezo seGlasgow saphuhliswa ngokusebenzisana kwe-UNWTO, iNkqubo yeZizwe eziManyeneyo (UNEP), Tyelela iScotland, iSiseko sokuHamba, kunye noKhenketho oluBhengeza iNgxamiseko yeMozulu, ngaphakathi kwesakhelo Inkqubo enye yePlanethi yoKhenketho oluZinzileyo izibophelele ekukhawuleziseni ukusetyenziswa okuzinzileyo kunye neepatheni zemveliso.
The Ishishini lezoKhenketho lifuna ukuba yinxalenye yesisombululo kutshintsho lwemozulu eyingozi, utshilo uMphathiswa wezoKhenketho waseSaudi, ethetha kumanyano olutsha lwezokhenketho lwehlabathi olukhokelwa yiSaudi Arabia kunye neSpain ekuqaleni kwale veki eGlasgow.
I-UNWTO nangona kunjalo yayingeyonxalenye yale Saudi kunye neSpain ekhokela inyathelo labachaphazelekayo abanamandla kunye noorhulumente. Isibhambathiso kwelo linge, yayiyisenzo, hayi izisombululo kuphela.
Ukongeza kwiNkomfa yeFuture in Investment (FII) esanda kuqukunjelwa eSaudi Arabia, isiphumo yaba sisivumelwano ISaudi Arabia kunye neSpain ukujoyina imikhosi ukuyila ngokutsha ukhenketho emva kwe-COVID kuquka ne-UNWTO.
Novemba 7, 2021 kwi-00: 12
Ngokusisiseko uyiphosile kwaye wayimela kakubi inqaku leSibhengezo seGlasgow. Konke kumalunga nesenzo. Ababhengezi bazibophelele ekunciphiseni ukukhutshwa kwekhabhoni ngama-50% ngo-2030 kwaye kufuneka bavelise izicwangciso zokwenza kwiinyanga ezili-12 zokutyikitya, emva koko banike ingxelo ngonyaka ngenkqubela yabo.